9789179753603 by Smakprov Media AB - Issuu
T ack till er som har möjligg j ort övers ättning o ch distributio n
av boken till tus entals femåringar runt om i S verige:
Semantix och deras översättare Musa M. Isse – översättare och validator Cancerfonden Gålöstiftelsen Jacob Wallenbergs Stiftelse
HORDHA C a ka In la dhaqdhaqaaqaa waa muhiim. Waxay dadk farxad. caawisaa in ay helaan firfircooni, caafimaad iyo dhaansinno, Haddii aan orodno, ciyaarno, baaskiilad wadno, horumar dabbaalanno, boodboodno, isrogrogno waxaa fiican ka hesha maskaxda … wararka ku Generation Pep waa urur samafal ah oo faafiya u wanaagsan saabsan in aqoon loo yeesho oo la abuuro wax ddadu waa in caafimaadka carruurta iyo dhallinyarada. Ujee ku nool fursad dhammaan carruurta iyo dhallinyarada Iswiidhan iyo caafimaad si loo siiyo inay ku noolaadaan nolol wanaagsan bilaa shuruud ah. Josefine Ururka Generation Pep oo kaashanaya qoraaga waxa ay rabaan Sundström iyo farshaxanadda Emma Göthner qiimaha ya in buuggan Saga iyo Samir uu noqdo mid faafi u shaqeeyo akhriska iyo aqoonta ku saabsan sida uu jidhku marka aynu dhaqdhaqaaq samayno. Generation Pep Bonnier Carlsen Josefine Sundström Emma Göthner a Generation Pep. Amiiradda koowaad iyo amiirka ayaa bilaabay ururk Waxa in buuggan la soo saaro ka dambeeyey shirkado waaweyn iyo qaar ka mid ah ururrada bulshada Iswiidhan.
T ack till Generatio n Peps rådgiv are:
Örjan Ekblom, docent och med.dr i fysiologi vid GIH Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare Ylva Trolle Lagerros, läkare och docent vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet
sagasagor: fiffiga kroppen och finurliga knoppen © Text: Josefine Sundström Lindberg 2017, uppdaterad och utökad utgåva 2019 © Illustrationer: Emma Göthner 2017, uppdaterad och utökad utgåva 2019 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm I samarbete med Generation Pep Översatt av: Semantix och Musa M. Isse Grafisk form: Caroline Linhult Redaktör: Stina Zethraeus Typsnitt: Bembo och Love Ya Like A Sister Tryckt av Livonia Print, Lettland 2021 ISBN 978-91-7975-360-3
J i d h c a af i ma a d q a b a iyo ma s ka x
f ay o w
Saga jikada ayay fadhidaa oo wax ayay toleysaa.
Irbad iyo dun ayey haysataa. Iyo bir farta la geshado. Waxay haysataa gal barkin duug ah oo ay rabto inay kiish ka samayso. Kiishku waa fiican yahay oo waxaa lagu qaataa dharka dabbaasha iyo shukumaanka marka dabbaal la aadayo. Waxaa kale oo lagu qaataa dhalada biyaha lagu qaato marka orod laga qaybgelayo. Ama tartan orod sida Saga mar walba tidhaa. 8
Saga weligeed kama ay qaybgelin tartan orod. Laakiin iyada iyo aabbaheed waxay mar taageereen hooyadeed oo tartan jimicsi ka qaybgashay. Waxay u aragtaa wax fiican in lambar xabadka lagu dhegsado oo dad kale lala ordo. Sidaas ayey Saga ka fikiraysaa marka ay marada ku toleyso irbad iyo dun. Waa inay taxadartaa marka ay wax toleyso. Taxadarla’aan qalad ayuu keenaa. Saga waqti dheer ayey hadda halkaas fadhiday. Waa dadaaleysey subaxdii oo dhan. Intii badneyd keligeed ayaa samaysay. Aabbaheed wuxuu ka caawinay oo qudha in u laabo dacallada marada. Marka ay Saga xadhig ku toshay afka kiishka jimicsiga waxay jecleysatay inay kiishkaas sii qurxiso. Waxay garatay inay dun midab qalinka u eg leh ku daabacdo. Oo ay dhexda uga tosho S weyn. S u taagan tolid, dhaqso, dabbaal iyo orod. S u taagan Saga.
In wax la daabacaa waa dhib badan tahay. Qalad yaa dhaca in kastoo ay Saga irbadda gacanta aad ugu hayso. Farihii ayey taasi ku adag tahay. Dunta ayaa laalaabmeysa oo maradu toos ma noqoneyso. Waxa oo dhan ayaa kharibmaya. Taas ka sokow Saga irbaddii ayey isku muddey. Aaa! Ayey ku cabatay. Irbaddii ayaa ka mudday calaacasha dhexdeeda. Waa xanuuntay oo dhiig ayaa ka yimid. Dhibic dhiig ah ugu yaraan. Saga dhiiggii ayey calaacashii ka leeftay oo mar kale isku dayday. Dhawr qodob ayey toshay. Halkaan iyo halkaas. Dhaqso ayey Saga u aragtay in ay qalad wax u daabacday. Qalad weyn oo aan kiishkiiba la kala furi karin. Markaas ayey ku xanaaqday. Cirbadda. Kiishka. Nafteeda iyo aabbaheed. Ma samayn karo, ayey Saga si xanaaq leh u tiri. Ma awooddo inay sii waddo. Iyadu waa isdhiibeysaa. Xanaaqii dartiis ayey kiishkii miiska ka tuurtay. Irbaddii iyo duntii oo ka lusha. Sidaas lama sameeyo, ayuu aabbaheed ku yiri. Saga waa og tahay inay qalad tahay in alaab la tuuro. Laakiin way is celin weydey. Waxay fahantay inay khasab ku tahay inay kiishka dhulka 10
ka soo qaaddo oo aysan cid kale soo qaadeyn. Laakiin waa diiddey oo xanaaq iyo caro awgeed ayeysan dooneyn inay meesha ka dhaqaaqdo. Aabbaheedna waa neeftuurayaa. Wax badan ayaad fadhiday oo waa ku daashay, ayuu yidhi aabbaheed. Waxaan u malaynaa inaad u baahan tahay inaad soo socsocoto oo hawo soo qaadato. Woxogaa bannaanka u bax, si aad hadhow u sii waddo tolidda. Saga dhulkii ayey mar kale fiirisay. Oo taas waa isku dayi kartay. Oo wax kale uma muuqdaan. Saga xiiso uma hayso inay bannaanka u baxdo. Waxba xiiso uma hayso. Isla markaas xumaan ayey dareentay in kiishkii dhulka weli yaal. Waa ka xumaatay oo ugu dambeyntii intay kacday ayey sii dhaqaaqday.
Bannaanka waxay kala kulantay qorrax iyo carafta caws mar dhow la jaray. Saga waxay ku soo wareegtay guriga oo waxay halkaas ku aragtay Samir oo ay deris yihiin. Wuxuu bannaanka la joogey eyga Lars-Laban. Waa ey uu Samir marmar dibedda u saaro. Kaalay Saga, ayuu Samir ku qayliyey. Waxaan rabaa inaan Lars-Laban wax fiican u sameeyo oo aan baro sida la isu rogrogo. Ma rabtaa inaad i caawiso? Samir inta uu dhulka jiifsaday ayuu tusay sida la isu rogrogo. Isla markaasna wuxuu eyga sanka u saarayaa kubbadda teeniska si uu soo jiito. Lars-Laban dabada ayuu ruxruxayaa. Jiifso! Ayuu Samir leeyahay cod khafiif oo amar ah.
Lars-Laban dhinac kale ayuu fiirinayaa oo waa hamaansanayaa. Ey yahow caajislowga ahi, ayuu Samir odhanayaa oo gacmaha cawska ku garaacayaa. Jiifso! Kolkaas ayuu Lars-Laban kor u boodayaa oo kubbaddii kala baxayaa gacanta Samir. Kubbad ma arki karo, ayuu Samir leeyahay isagoo istaagaya oo qoslaya. Hadda Saga ayaa iyaduna rabta inay isku daydo. Jiifso, ayey tartiib u odhanaysaa. Jiifso! Laakiin Lars-Laban dheg uma dhigin. Saga waa kadaloobsaneysaa oo eygii dhegta u salaaxaysaa. Kolkaas ayuu sanka cagaha saarayaa, kubbaddii hortiisa taal. Haa sidaas ayaa lagaa rabaa. Ey fiican baad tahay, ayey Saga ku odhanaysaa. Hadda waa is rogrogeynnaa. Laakiin Lars-Laban taas ma rabo. Oo wuxuu bilaabayaa in uu kubbadda calaliyo. Waa calalinayaa oo calalinayaa. Is rogrog hadda! Saga iyo Samir timaha ayey tartiib uga jiidayaan. 13
Laakiin Lars-Laban isma dhaqaajinayo. Meeshiisa ayuu iska jiifaa. Saga ayaa ku fekertay in uu tartiib wax u fahmo mar haddii uu Lars-Laban ey yahay. Laga yaabee in uu rabo in uu mar kale arko sida loo sameeyo. Cawskii ayey ku jiifsaneysaa oo is rogrogeysaa. Si tartiib oo muuqata ayey isu rogrogeysaa. Hore iyo gadaal. Waxay isku dayeysaa inay qalaamarogato. Marar badan oo isku xiga. Laakiin Lars-Laban kubbad bes ayuu u jeedaa. Isrogroggu ma ahan wax uu ka helayo, ayuu Samir odhanayaa. Saga woxogaa ayey fekereysaa. Muxuu LarsLaban ka heli karaa oo aan ka ahayn calalinta kubbadda?
Kolkaas ayaa fikir ku dhashay. Waxa ay isla samaynayaan meel laga boodboodo. Waa wax ay eydu badanaaba jecel yihiin. Waxyaalo badan ayaa loo baahan yahay marka garoonkaas la samaynayo. Samir ayaa ku talaniya inay aadaan oo soo arkaan “aqalka farxadda” oo ku yaal Solrosvägen oo ah meesha ay deggan yihiin. Waxa ay halkaas ka heleen alwaax la iska tuuray oo ay isla soo qaadeen. Waxay sanduuqa carrada kala soo baxayaan ulo iyo giraangir. Samir wuxuu soo qaadayaa bushkuleetiga lugaha lagu riixo iyo yaxaasbadeed bac ka samaysan. Saga waxay soo qaadeysaa xadhigga lagu boodo iyo kiish weyn. Waxaa wanaagsan in la haysto dhawr buste. Iyo kabo caag ah oo duug ah.
Saga iyo Samir waxna waa soo qaadeen waxna waa soo jiideen. Wixii ayey isla dhiseen. Waa kaas!
Waa fiican tahay in garoon la dhisaa. Waxay u ekaatay beerta lagu cayaaro oo wax waliba yaalliin.
Goolka Halka laga bilaabayo
Mar haddii garoonkii la dhisay waa in la tijaabiyaa. Kaalay Lars-Laban, ayey ku dhawaaqday Saga. Soo dhaqso! Alla maxaa dhici doona. Waxay rabtaa inay bilowdo. Hadda! Laakiin Lars-Laban waa uu la yaaban yahay oo kubbaddiisii ayuu iska ur-ursanayaa. Hadda aan tijaabinno eyga la’aantiis, ayuu yiri Samir. Adigu bilow. Alwaaxu waa liicliicayaa oo in uu toos ahaado ayaa adag tahay. Saga ayaa tartiib tallaabo u qaadeysa.
Halka laga bilaabayo
Mise markiiba alwaaxiiba alwaax ma aha … Saga waxay iska dhigtay sidii inay buur dusheeda saaran tahay. Buur. Dabayshii ayaa timihii ka qaadday. Dhawr jeer ayey ku dhowaatay inay dheellido oo madax-madax u dhacdo. Laakiin haddii ay gacmaha fidiso oo lugaha taxadar ugu socoto waxaa laga yaabaa inay ka gudubto. Samir waa daba socdaa. Waxa ay soo gaareen meeshii giraangiraha. Sida jasiirado badweyn ku dhexyaal ayey giraangiruhu dhulka u safan yihiin. Saga waxaa hirarka uga dhex muuqda yaxaasbadeed. Baalashiisa ayaa muuqda oo waa soo dhowaanayaa. Iska jir yaxaasbadeed! Ayey ku qaylisay. 19
I caawi! Midkoodna ma rabo in ay cunto u noqdaan yaxaasbadeedka. Waa inay sameeyaan wax walba si aysan biyaha ugu dhicin. Waa boodeen. Bood, bood, bood. Hadba jasiirad. Markii ay ka gudbeen giraangirihii oo dhan ayey arkeen baalkii yaxaasbadeedka oo sii fogaanaya. Nabadeey yaxaasbadeedoow, ayey yidhaahdeen iyaga oo qoslaya oo “high-five” sameynaya, halkiina ka sii ordeen. 20
Uluhu waa kuwo dhib badan. Waa dhib badan tahay in xadhigga la giijiyo. Saga waxay tababar ku sameyneysaa si aysan caguhu ugu siiban. Samir sidoo kale ayuu u tababaranayaa. Woxogaa tababar ah kaddib waxay dareemeen in ay xariifiin yihiin. Saga ayaa ku bilowday tallaabsi tartiib ah. Meelaha sirkuska waxay
dhaqdhaqaaqyadaasi u muuqdaan kuwo fudud. Nalalka waaweyn ayaa sii qurxinaya oo ka dhigaya farshaxan la yaab leh. Hal lug. Labada lugood. Saddex iyo afar. Waaw! Daawadayaashii ayaa sabciyey, fannaaniintiina intay madaxa rogeen ayey nabadeey yidhaahdeen. 21